भाद्र २, २०७८ बुधबार 40
अधिकाशं हिन्दुको घरमा तुलसीको बोट हुने गर्दछ । तुलसीलाई हरेक शुभ कार्यमा समावेश गरिन्छ । तुलसीको पात भगवान विष्णुका लागी अति प्रिय मानिन्छ ।यहि तुलसीको पातले मानिसलाई स्वास्थ्यमा समेत लाभ पुर्‍याउँछ । यस अलावा धार्मीक मान्यता अनुसार तुलसीको पातको प्रयोगले धनको समस्या वा घरमा हुने नकारात्मक शक्ति नाश गर्न उपयोगी मानिन्छ । यसका लागि केवल तुलसीको ५ पात आवश्यक हुन्छ ।
२. जुन दम्पतीको वैवाहिक जीवन राम्रो बनिरहेको छैन अथवा एकअर्कासँग झगडा गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि तुलसीको ५ वटा पात उपयोगी हुन्छ । दुबै दम्पतीले तुलसीको ५ वटा पात आफ्नो साथ राखेमा दाम्पत्य जीवनमा मधुरता छाउनेछ ।
३. तुलसीको ५ वटा पातलाई रातो कागजमा बेरेर पूजा स्थलमा राखी नियमित यसको पुजा गर्नुहोस् । तपाइले राखेको तुलसीको पातलाई हरेक दिन बदल्नुहोस् । सुकेका पातलाई जलमा प्रवाहित गर्नुहोस् । लगातार २१ दिनसम्म यसो गर्नु पर्दछ । ती पातलाई आफ्नो मनको इच्छा बताउनुहोस् । यसो गरेमा केहि दिनमै तपाई फरक पाउनु हुनेछ । यसो गर्दा तपाईको भविष्य चम्किने धार्मीक मान्यता रहेको छ ।
Prevउपचार गर्ने पैसा छैन’ भनेर प्रहरीलाई खबर गरेको केहि समयपछी प्रहरी घर पुग्दा दम्पतिकै भेटियो श,व
Nextवडाध्यक्ष भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि विकासको कामहरु नगरेको भन्दै जनताले बिजुलीको पोलमा बाँ’धे वडाध्यक्षलाई